May 24, 2021 - Babal Khabar
May242021 by EditorNo Comments
नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न बिप्लवको यस्तो कडा चेतावनी
काठमाडौँ, १० जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले राष्ट्रहितविपरीतको कार्य नगर्न केपी ओली सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रपतिले आइतबार जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै विप्लवले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ‘नागरिकताजस्तो राष्ट्रिय महत्व एवम् जनसरोकारका विषयमा निर्णय लिँदा जनमतलाई बुझ्न र विज्ञहरूको व्यापक परामर्श लिन आवश्यक हुन्छ’, विप्लवमा भनिएको छ, ‘त्यसो गर्नुको सट्टा सरकारले आफ्नो सत्तासङ्कट टार्न, कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुसी पार्नका लागि मात्र यस्ता निर्णय लिन्छ भने त्यसको मूल्य सिङ्गो देशले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । अतः हाम्रो पार्टी त्यस्ता राष्ट्रहितविपरीत कार्य नहोऊन्, त्यस्ता निर्णय खारेज गरिऊन् भन्ने चेतावनी केपी ओली सरकारलाई दिन चाहन्छ ।’संविधान जारी गर्दा नै नागरिकतासम्बन्धी कयौँ गलत एवम् त्रुटिपूर्ण प्रावध
खनाल–नेपालसहित ११ नेता एमाले पार्टी सदस्यबाट नै निष्कासित, को को भएत निष्कासित?(नामावली सहित)
काठमाडौँ — नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि निष्कासन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले खनाल र नेपालसहित ११ सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले उल्लेख गरेका छन् । पार्टीबाट निष्कासित हुनेमा खनाल र नेपालसहित भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, कलिला खातुन, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु रहेका छन् । शनिबार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको भन्दै खनाल–नेपालसहित ११ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कसैले पनि स्पष्टीकरणको जवाफ नबुझाएपछि एमालेले उनी
कोरोनाबाट मृ त्यु हुनेको परिवारलाई १० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय,काहा सम्पर्क गर्ने हेर्नुहोस् ।
कोरोनाबाट मृ त्यु हुनेको परिवारलाई १० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय दमौली, ८ जेठ – तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कोरोनाबाट मृ त्यु हुने विपन्न परिवारलाई रु १० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकले कोरोना सङ्क्रमणबाट मृ त्यु हुने विपन्न परिवारलाई शवबाहन र काजकिरीया खर्चवापत जनही रु १० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।सम्बन्धित वडाको सिफारिशमा मृत्यु भएकाको परिवारलाई राहत दिने निर्णय भएको प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै कोभिड–१९ सङ्क्रमित भई उपचाररत विपन्न एवं मजदुर परिवारलाई रु पाँच हजार उपचार एवं सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।नगरपालिकामा हालसम्म ६१६ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएकामा ४३३ जनाको प्रतिवेदन आउँदा २९१ सङ्क्रमित भएका छन् । त्यसमध्ये १० जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै ५९ सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । दुई सय २२ जना
दु:खद खबर : आन्द्रामा पनि भेटियो ब्ल्याक फङ्गसको सङ्क्रमण,यसरी सर्ने भएकोले सर्तक रहन अपिल
काठमाण्डौ । ब्ल्याक फङ्गसको सङ्क्रमण (म्युकरमाइकोसिस) तीव्र रूपमा फैलिरहेको बेलामा भारतमा ब्ल्याक फङ्गस सङ्क्रमण आन्द्रामा पुगेका दुई बिरामी भेटिएका छन् । दिल्लीको सर गङ्गाराम अस्पतालमा कोभिडको उपचार गराइरहका बिरामीमध्ये दुई जनामा ब्ल्याक फङ्गस सङ्क्रमण आन्द्रामा पुगेको पाइएको हो । अस्पताल व्यवस्थापनका अनुसार ब्ल्याक फङ्गसको सङ्क्रमण आन्द्रामा पुगेका र आन्द्रा छेडेको यो पहिलो पटक हो । आन्द्रामा पुग्ने ब्ल्याक फङ्गसको सङ्क्रमणलाई ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल म्युकरमाइकोसिस भनिन्छ । जसलाई निकै दुर्लभ मानिने गरिन्छ । ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल म्युकर माइकोसिस देखिएको ५६ वर्ष र ६८ बर्षे उमेर बिरामीमा मधुमेहको समस्या थियो । अस्पतालका अनुसार ५६ वर्षको बिरामीमा सङ्क्रमण भएको पुष्टि हुनुअघि कोभिड उपचारका लागि स्टेरोइडको प्रयोग गरिएको थिएन । उक्त बिरामीमा कोरोनाका हल्का लक्षणहरू थिए । बिरामीलाई पेटको दुख
आज नेपालमा कोरो-ना संक्रमितकाे सङ्ख्या,निको हुने संख्या र कति जनाको ज्यान गयोत? पूरा हेर्नुहाेस्
काठमाडौं / पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ७४२५ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा थप १८५ जनाको मृत्यु भएको छ । साथै ७ हजार १३५ जना निको भएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा थप १८५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७४२५ संक्रमित थपिएका छन् । २४ घण्टामा देशभर ७ हजार २२० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरिएको १९ हजार ८४६ पीसीआर परीक्षणमा ७ हजार २२० जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५ लाख २० हजार ४६१ पुगेको छ । यस्तै ७ हजार १३५ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै निको हुनेको संख्या ३ लाख ९८ हजार ४८३ पुगेको छ । नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या १ लाख १५ हजार ४४७ पुगेको छ । क्वारेन्टाइनमा ९२४ जना रहेका छन् । स्वास्थ्
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट,नेपाल पक्षबाट यि २३ सांसदले गरे रिटमा हस्ताक्षर
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनले रिट पेस गरेको छ । सोमबार विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको र उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् । आइतबार नै अदालत जाने भनिए पनि कानुनी ढाँचाअनुसार कागजातसहितको विवरण र मस्यौदा तयार पार्न ढिलाइ भएपछि सोमबार मात्रै रिट पेस गरेका हुन् । रिटमा माग गरिएको छ, 'सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका कामकारबाहीहरुबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको स्पष्ट छ । हामी निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निवेदकहरुमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुवै दाबीकर्ता न
पहिलो इमान्दार नेत्री, शान्ता चौधरीले फिर्ता गरिन् सरकारी गाडी
काठमाडौं। विघटित प्रतिनिधि सभा सांसद तथा एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले संसद सचिवालयले उपलव्ध गराएको गाडी फिर्ता गरेकी छिन्। शान्ता चौधरी लेखछिन , ३ वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा ) र केही महिना नेकपा ( एमाले ) संसदीय दलको सचेतकको रुमपा भुमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त गरें । उक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्ने मेरो पार्टी प्रति धेरै आभार व्यक्त गर्दछु । जिम्मेवारीले जिम्मेवार बनाउँदो रहेछ , धेरै कुरा सिकाउँदो रहेछ , सिक्दै दायित्व निर्वाह गरें । धेरै साथीहरुको सल्लाह , सुझाव र बौद्धिक सहयोग पाउन सकें , पार्टी नेतृत्व र सिङ्गो पार्टी पंक्तिको साथ पाएँ , म सबैप्रति नतमस्तक भएर श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु । पार्टीले जिम्मेवारी दिएकै कारण मैले अनुभव प्राप्त गरें , अनुभवकै कारण जिम्मेवारी वहन गर्न सके , काम गर्दा कमजोरी पनि भए होलान , सबै अनुभवको संगालो मसँग छ । म फेरि पनि आभारी छु ,
विषाक्त स्यानिटाइजर बजारमा होसियार !!!!
बजारमा विषाक्त स्यानिटाइजर रहेको’ सूचना प्राप्त भएलगत्तै महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी चन्द्रकुवेर खापुङले निगरानीका लागि ‘इन्टेलिजेन्स’ परिचालन गरे । टोली ‘मुभ’ भयो । भएजति सबै स्यानिटाइजरका नमुना खरिद गरिए । लगेर औषधि व्यवस्था विभागको प्रयोगशालामा परीक्षण गरियो । लिइएका नमुनामध्ये ‘प्लस ७५’ ब्रान्डको स्यानिटाइजमा २४ प्रतिशत ‘मेथानल’ रहेको प्रमाणित भयो । जुन ‘एसेटिक एसिड’ हो । मानिसका लागि यो विषसमान हुन्छ । ‘मेथानल’ विष भएको प्रमाणित भएपछि महाशाखाको ‘इन्टेलिजेन्स’ टोली ‘प्लस ७५’को कारखाना खोज्न लाग्यो । यसक्रममा त्रिपुरेश्वरस्थित ‘प्लस ७५’ नामको स्यानिटाइजर बेच्ने होलसेल बिक्री केन्द्र फेला पर्‍यो । ‘लाइफ लाइन’ नामको बिक्री केन्द्रका अधिकारीसँग सोधपुछपछि ललितपुरको इमाडोलमा स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने उद्योग नै रहेको खुल्यो । प्रहरी टोली आइतबार उद्योगमा छापा मार्न पुग्दा बन्द
नागरिकता अध्यादेश विघटनको दुई दिन नबित्दै जारी किन यस्तो ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त बाबुआमाका र बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरेकी छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा दलहरूको विवादका कारण लामो समयदेखि नागरिकता ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयक विचाराधीन थियो । त्यति बेला विधेयक पारित गर्न ध्यान नदिइएकामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दुई दिन नबित्दै नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन गर्न भन्दै अध्यादेश जारी गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार नै ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यही दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सिफारिस गरिएका कोभिड संकट व्यवस्थापन र शपथसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट तत्कालै जारी गरिएका थिए । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकलाई छलेर ल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश भने आइतबार मात्रै
सामाजिक सुरक्षाको भार बढाउँदै सरकार, वर्षमा कति हुन्छ वितरण ?
१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षातर्फको भार बढाउँदैछ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत जेष्ठ नागरिक भत्ता, अपांगता भत्ता तथा असहाय एकल महिला भत्ताको दायरा बढाउने तयारी गरेको हो । जेष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश २०७८ मार्फत समेत असहाय एकल महिला भत्ता र अपांगता भत्ताको समेत दायरा बढाउने तयारी गरेको छ । यसले आगामी आर्थिक वर्षमा चालु खर्चतर्फको भार बढाउने निश्चित छ । चालु खर्चमा कति हो सामाजिक सुरक्षाको भार ? महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि गरेको खर्चको भार कूल चालु खर्चको तुलनामा साढे १३ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले कूल ७ खर्ब ८४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । यो रकममध्ये सामाजिक सुरक्षाका कार्यक